Madaxweyne Shariif Xasan Maka Tanaasulayaa Tartanka Doorashada Koonfur Galbeed.? – Heemaal News Network
Madaxweyne Shariif Xasan Maka Tanaasulayaa Tartanka Doorashada Koonfur Galbeed.?
Warar lagu kalsoonaan karo oon ka helnay ilo ku dhaw dhaw Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegaya in galabta uu Shariifka ka tanaasulayo Doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Shariif Xasan oo saacadihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan kawaday magaalada Baydhabo ayaa la sheegay in uu go’aansaday in uu ka tanaasulo Doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee ka dhaceysa magaalada Baydhabo.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Shariifka ku guul dareestay in uu kasbado Xildhibaanada Koonfur Galbeed, waxa uu sidoo kale Shariifka ku guul dareestay qorshe uu doonayay oo ahaa in uu is casilo Gudoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed si dib u dhac dheer ugu yimaado doorashada.
Ilaha ku dhaw dhaw Shariif Xasan ayaa sheegay in cadaadis badan uu kala kulmay Dowlada Federaalka iyo Siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ku abuurtay niyad jab keentay in uu isaga haro tartanka loogu jira Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Waxaa laga dhur sugayaa shirka jaraa’id ee saacadaha soo aadan Shariif Xasan ku qabanayo magaalada Baydhabo, waxaana suurto gal ah in uu isbadal ku yimaado qorshaha tanaasulka Shariif Xasan.
Waxii Warar ah ee kusoo kordha kala soco Wararkayaga dambe
Cuqaasha Gobolka Togdheer Oo Saluug Xoogan Ka Muujiyay Mushaharka Ay ka Qaataan Xukuumada Biixi.
Gudomiyaha golaha shacabka Koonfur Galbeed Mudane C/qaadir Shariif Sheekhunaa Maye, oo warbaahinta kula hadlay magaalada Baydhabo ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay warqad lagu magacaabay guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed. Waxaa uu sheegay in warqaddaasi ay […]
Jadwalka & Shuruudaha Doorashada Madaxweynaha Konfur Galbeed Oo la Shaaciyay.(Akhriso)
Guddiga doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay maanta yeesheen ka soo saaray qaabka ay u dhici doonto iyo jadwalka doorashada Madaxweynaha maamulkaas oo la qaban doono 17ka bisha Novembar ee fooda nagu soo […]
Kulamo Baydhabo ku Dhaxmaray Madaxda Dowladda Federaalka iyo Kuwa Maamul Gobolleedyada.
Magaalada Baydhabo xarunta KMG u ah maamul Koonfur Galbeed ayaa saacadihii ugu danbeeyay waxaa kulamo gooni gooni ah ah ku yeeshay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed […]